မျက်ကွယ်ပြုမထားသင့်တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒ… – PVTV Myanmar
မျက်ကွယ်ပြုမထားသင့်တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှာ ဧပြီ ၂၄ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အာဆီယံ ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကတော့ ထုတ်ပြန်ချက် ၅ ရပ်ထွက်လာပြီး ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံရဲ့ ထုတ် ပြန်ချက် ၅ ရပ်ကို အကြမ်းဖျင်းပြန်ပြောရရင် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးက ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ကြဖို့၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်က ကြားဝင်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးဖို့၊ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားရေး ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးဖို့၊ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့ကို မြန်မာပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပြီး သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲ မစတင်ခင်အချိန်ကတည်းက အာဆီယံကနေ သိပ်ပြီး မျှော်လင့် မထားခဲ့ကြပါဘူး။ ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ အာဆီယံရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေမှာ လိုအပ်ချက်တွေ များစွာ ရှိနေခဲ့ ပါတယ်။ အာဆီယံရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို စစ်အာဏာရှင်တွေက မလိုက်နာခဲ့ရင် အာဆီယံက ဘာဆက်လုပ် မှာလဲဆိုတာတောင် ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြ မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အလားတူပဲ၊ ဒါတွေကို ဘယ်တော့ အကောင်အထည်ဖော်လို့၊ ဘယ်တော့ ပြီးမှာလဲ ဆိုတာကိုလည်း ဖော်ပြထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
တကယ့်လက်တွေ့မှာ ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုတောင် စစ်အာဏာရှင်တွေက လိုက်လျောဖြည့်ဆည်းမှာ မဟုတ် ဘူးဆိုတာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ လက်အောက်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေက ကောင်းကောင်း သဘောပေါက် နားလည်ထားပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေကို သက်ဆိုးရှည်အောင် အချိန်ဆွဲပေးနေတာ သက်သက်ပဲလို့ မြန်မာပြည်သူတွေက ယုံကြည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အဓမ္မအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်ပိုင်း ရက်အနည်းငယ်ကစပြီး မြန်မာပြည်သူတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်အလို မရှိကြောင်းနဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရကို အာဏာ ပြန်လွှဲပေးဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ် နေကြတာ ဒီကနေ့ဆိုရင် ရက်ပေါင်း ၈၀ ကျော်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်း စစ်အာဏာ ရှင်တွေရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် ပြည်သူ ၇၅၀ နီးပါး သေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်သလို၊ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံနေရသူအရေအတွက်ကလည်း ၃၃၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဟာ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ခုအချိန်အထိ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခံထားရသူပေါင်း ထောင်နဲ့ ချီရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေရဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေဟာ လူမဆန်ဘဲ ရက်စက်လွန်းလှပါတယ်။ လမ်းတွေပေါ်မှာ သာမကဘဲ၊ အိမ်တွေထဲအထိပါ အတင်းအဓမ္မ ဝင်ရောက်ပြီး ပြည်သူတွေကို ကြက်ကလေး၊ ငှက်ကလေးတွေလို ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နေတဲ့အပြင် မထင်ရင် မထင်သလို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တွေသမျှ အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုလည်း နေရာအနှံ့ ထင်သလို လုယက်ယူငင်နေကြတာကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝ ဟာ ဘာမှ လုံခြုံမှု မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး ဆိုးဝါးပြင်းထန်လှတဲ့ ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုတွေ၊ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနိုင့်အထက် ပြုမှုတွေကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေကို မုန်းတီးရွံ့ရှာစိတ်က သံမှိုနှက်ထားသလို ခိုင်ခိုင်မာမာ စူးနစ်ဝင်ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ အာဏာရမ္မက်ကြီးမားလှတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ရရာနည်းနဲ့ အမြစ်ဖြတ် သုတ်သင်ကြဖို့ မြန်မာပြည်သူအားလုံးက သန္နိဋ္ဌာန်ခိုင်မာစွာ ချထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေပြောသလို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာဖို့ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်မှန်းချက်က ပြည်သူတွေအပေါ် ဆိုးဝါးရက်စက်စွာ အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့၊ ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်ပါးစေတွေကို အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ဖို့၊ လက်နက်အားကိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ စစ်တပ်ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကထဲကို ဘယ်တော့မှ အဝင်မခံတော့ဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီး တရားမျှတတဲ့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ဖို့၊ ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကို အမှန်တကယ် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးမယ့် ဖက်ဒရယ် ပြည်သူ့တပ်မတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ဖို့၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို လေးစားလိုက်နာတတ်တဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကို ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမျှောမှန်းချက်တွေကို ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် စစ်တပ်က ထင်ရာမြင်ရာ ပုဒ်မတပ်ပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားတဲ့ သူတွေကို ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လိုသလို၊ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ စစ်တပ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေအလိုက် တရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကသာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဆန္ဒဆိုတာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ ပါဝင်ဖြေရှင်းပေးလိုတဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ကောင်းကောင်း နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အာဆီယံတို့လို အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည် ထွန်းကားဖို့ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အောင်မြင်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်လာမှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးခဲ့ရသူတွေ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ကြရသူတွေအပါအဝင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖိနှိပ်ခံခဲ့ကြရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကသာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခရီးမှာ ဦးထိပ်ပန်ဆင်ထားရမယ့် အရေးကြီး ဆုံးအရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီမှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒကသာ အရာရာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကလည်း တရားမျှတမှုကို လိုလားတောင့်တနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အလေးမထားဘဲ၊ လက်နက်အားကိုး အကြမ်း ဖက်သူတွေရဲ့ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုတွေကို ယုံမှားပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ ပါဝင်စွက်ဖက်ကြဖို့ ကြိုးစား မယ်ဆိုရင်တော့ အာဆီယံအဖွဲ့ကြီး အခုကြုံတွေ့ရသလို မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အားကိုးယုံကြည်မှုကို မလွဲမသွေ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာဆိုရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ မဲဆန္ဒနဲ့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)နဲ့ CRPH က ရွေးချယ်တင်မြှောက် ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) လည်း ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေ ဘက်က ရပ်တည်ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်တော့ CRPHနဲ့ NUG အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပြည်သူကတင်မြှောက်ပေးထားတဲ့ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း CRPH တို့၊ NUG တို့ နဲ့ ဆက်သွယ် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံတကာကက တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း အတော်များများ ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြု မထားဘဲ၊ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ လိုလားချက်ကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းကသာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေး အတွက် အထောက်အကူပြုမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Like – 6.2K Share – 914
Aung Myo Htay says:
ASEAN is made in China. .
2021-04-25 at 8:31 PM
ASEAN စည်း ဝေး တခါ ချိန်း ရင် ၁ လ ခန့် ကြာ ပါ တယ် စောင့် ရတဲ့ လ အ တွင်း သေ သူ တွေ များ လာ တာ က လွဲ လို့ ပြည် သူ အတွက် ထိ ရောက် တဲ့ ဖြေ ရှင်း ချက် ရေ ရာ စွာ မ ရ လာ ခဲ့ ပါ ဘူး
မတရား လုပ် တဲ့ မအလ နဲ့ ညှိ ဘို့ လုပ် အုံး မှာ ပါ ဘဲ
အလကား အချိန် ကုန် မ ခံ ပါ တော့ နဲ့
သူ တို့ လူ မှုအကူ အ ညီ မက် လုံး လဲ ဘဝင် ကျ စ ရာ လာ မှာ မဟုတ် ပါ
ASEAN အဖွဲ့ ကပြည် သူ အတွက် လိုက် ပိတ် နေ တဲ့ လမ်း တ ခု ပါ ဘဲ
2021-04-25 at 8:32 PM
ပြောချင်တဲ့ စကားတွေနဲ့ ထပ်တူပါဘဲ ကျေးဇူးပါ
နောင်ဆို သုံးသပ်ချက် အကျဉ်းချုပ်လေးပါ စာနဲ့ရေး ထည့်ပေးရင် ကောင်းမယ်ထင်! …
” ကွန်နက်ရှင်က နားထောင်ဖို့ ခွင့်မပြု “
အစီအစဉ် ကောင်းပါတယ်။English စာတန်းထိုးရင် ပို ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ် ။ အကြံပြုတာပါ
ျပည္သူေတြ ေသြးပူေနတုန္းမွာ လုပ္စရာရွိတာအျမန္လုပ္ပါ ျပည္သူလူထုေတြေသြး
ေအးမွ ထလုပ္ရင္ေတာ့ လူမနည္းရွာရခတ္လိမ့္မယ္ေနာ္ NUGသိေစဖို့crd#
Momo Khin says:
2021-04-25 at 8:46 PM
အာဆီယံ ထဲက ထြက္ဖို႔ သင္ခန္းစာေပးလိုက္တာ
NUG လုပ်ဆောင်ချက်များ အမြန်ဆုံး အောင်မြင်ပါစေ။ ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။
2021-04-25 at 9:02 PM
အာဆီယမ် ကြားဝင်စရာမှ မလိုတာ..စစ်ကောင်စီ ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးဖမ်းဖို့ဘဲ
​သောက်​ရေးပါတဲ့ အာဆီယံ ဂျင်းသိပ်ထည့်တာ
2021-04-25 at 9:36 PM
Make an english channel
ပန္း ေဟမာန္ ခင္ says:
2021-04-25 at 9:54 PM
English စာ ထ မ္း ထိုးေပး ပါ
လောလောဆယ် အရေးကြီးဆုံးက.. အဖမ်းခံနေရတာနဲ့အသတ်ခံနေရတာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာကို ဦးစားပေးသင့်ပါကြောင်း ………ဒီကိစ္စကို မဖြေရှင်းနိူင်ရင် ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မူ့ဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်
Shwe Kae Maung says:
2021-04-25 at 10:19 PM
ဟိုအရင် နေဝင်း သန်းရွှေ လက်ထက်
အခုထိ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေကို
Asean အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံထဲက တရားဝင်
Asean is made in China… ?
2021-04-25 at 10:44 PM
The puppet of China.
We don’t need to depend Asean.We never look up Asean. Asean also like chain. Not good for us.
Good voice and good plan.
Thank you so much instead of our people.
ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးမပြုတဲ့ အာဆီယံက နှုတ်ထွက်ပေးပါ NUG
Khin Mg Than says:
2021-04-26 at 9:05 AM
မြန်မာလဲဘဲ Burmexit လုပ်သင့်ပါပြီ။
Mya Sandar says:
ညဆိုလဲ ခေါင်းပြားအောင်မအိပ်နိုင်ဘူး နေ့ဆိုလဲ အထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်နဲ့ ဘယ်မှာလဲ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လုံခြုံမှူ့
2021-04-26 at 12:48 PM
2021-04-26 at 2:11 PM
အာပလာစီယံက ျမန္မာ ျပည္သူ‌ေ တြရဲ့ဆန္ဒကိုလံုးဝလံုးဝဂရုမစိုက္ပါ။
2021-04-26 at 7:23 PM
သူတို့ ကို အားကိုးစရာ အစစ်လို့ မမြင်ပါ ဘူး
ကိုယ့် ပြည်ထောင်စု သားများ သာလျင် အားကိုး ရမှာပါ
2021-04-27 at 9:54 AM
2021-04-27 at 3:52 PM
Thi Thi Soe says:
2021-04-29 at 5:22 PM
အဲ့ Asean က နားပင်းနေလား မျက်စိကန်းနေလ ား အဲ့လိုပဲ မေးလိုက်ချင်တယ်။